Nolosha Soomaalida kunool Denmark
Ridwaan Haji - Copenhagen, Denmark.
24.12.2004. | ridwanhaji@yahoo.com
Soomaalida ku nool dalka denmark oo horay qiyastoodu ay u ahayd 17,400 ayaa sanadahan danbe ay aad usoo yaraanaysaa iyadoo sabab looga dhigayo in dadka Soomaalidu ay u guuraan intooda badan dalka Britain, waloow ay jiraan tiro yar oo qoysas u guura dalal kale.
Soomaalidu waxaa ay guud ahaan daganyihiin caasimadda dalkan ee Copenhagen iyo magaalooyinka kale ee Arhus iyo Odense, waxaana haysata dhibaatooyin dhaqan-dhaqaale iyo kuwo la xiriira dhaqanka guud ee dalka ay ku noolyihiin, waxaa soomaalida ku nool dalkan marka aad waydiiso sababta keentay in ay noqdaan reer-guuraa ay ii sheegeen in ay jiraan dhibaatooyin guud ahaan ka haysta nolosha.
Cunista qaadka iyo dhibaatooyinkiisa.
Cabdulaahi Aden Cali oo kamid ah masuuliyiinta Idaacadda Somali Radio Copenhagen waxaa uu iigu waramay in dhibatooyinka ugu badan ee soomaalida haysta uu kamid yahay jaadka oo laga mamnuucay dalkan , waxaana jaadku uu keenay dhibaatooyin in qofku uu noqdo ma shaqyste iyo in qoysaska wada nool ay kala tagaan.
Odense waxaa ay kamid tahay meelaha inta badan booliska dalkan uu ka codsado Soomaalidu in ay ka caawiyaan sidii loo cidhib tiri lahaa cunidda qaadka oo dhibaatooyin sidii qofku uu ku fahmi lahaa nolosha iyo dadka uu ku dhex noolyahay.
horay waxaa ay dawladda dalkan u sheegtay in ay wax ka qabanayso sidoo talaabooyin looga qaadi lahaa kooxaha muqayiliinta ah iyo goobaha lagu cuno ama lagaga ganacsado , wasiirka arimaha qaxootiga iyo shisheeyaha Denmark Bertal Haarden waxaa uu dhowr jeer u sheegay dadka Soomaalida ah in ay talaabo ka qaadayaan ka hortagida cunidda Qaadka.
Warbixin kooban oo ku saabsan Denmark.
Denmark waxaa uu kamid yahay dalalka la isku yiraahdo Scandinavia, waxaana uu ku yaalaa Woqooyiga qaaradda Yurub waxaa uu xuduud la wadaagaa dalalka Jarmalka iyo Sweden oo iyaguna kamid ah dalalka ay ku noolyihiin dadka Soomaalida ah oo xiliyo kala duwan soo galay guud ahaan Yurub.
Dhulka waxaa qiyastiisu ay tahay 43,094 sq km , iyadoo 700 sq km oo kamid ah ay tahay biyo, waxaa dalkan ku nool sida lagu sheegay warbixinta CIA World Factbook dhowr sano ka hor dad gaaraya 5,352,815. waxaana dadku ay ku hadlaan Danish.
Dadyoowga aan dalka u dhalan ee ku nool dalkan denmark (Ethnic groups) waxaa ka mid ah Soomaalida,Turkida iyo Iraaniyiinta.